रामदेवको पछि लागेर मुलुक बन्छ ?
Tuesday, 29 Nov, 2016 9:50 AM
काठमाडौं, १४ मंसिर । योगगुरु रामदेवको योग शिविरमा नेताहरु मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती मगरदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्म पुगे । मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई नै आफूकहाँ तान्ने शक्ति के छ रामदेवमा ?
उनी योगका गुरु त हुन् नै । उनले यसलाई नै आधार बनाएर आफ्नो व्यापार बढाइरहेको छर्लंग छ । व्यापारलाई दिन दुई गुणा, रात चार गुणा बनाउन उनले अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेको देखिन्छ । त्यसमा उनले नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई योगमा सहभागी गराएर व्यापार बढाउने जुक्ति अपनाएको चर्चा चलेको छ । भारतीय योग गुरु रामदेवको नेपालमा अवैध लगानीबारे समाचारसमेत आइसकेको छ । अब कुरा रह्यो– राज्यका हरेक निकायले विदेशी लगानीका नाममा स्थानीय स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको यथार्थचाहिँ नबुझ्ने ? कि बुझेर पनि बुझ पचाउने ?